IYurophu ithola ifu elinemisebe yeRuthenium 106 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Muva nje i-French Institute for Radioactivity and Nuclear Safety (I-IRSN, iziqalo zegama layo ngesiFulentshi) sikhiphe isitatimende ngefu eliqukethe iRuthenium 106. Mhlawumbe imvelaphi yayo ivela eRussia noma eKazakhstan, ukukhishwa kwayo kwale nuclide enemisebe ejwayelekile kusetshenziswa kwezokwelapha zenuzi. Ngaphambi kokuqhubeka, uqokomisa ukuthi uphenyo lwe-IRSN luqinisekisa ukuthi ukugxila kweRuthenium 106 okutholwe e-Europe akunamphumela empilweni yomuntu noma emvelweni.
Ngesikhathi sikaSepthemba 27 noNovemba 13, iziteshi zaseSeyne-sur-Me, Nice ne-Ajaccio ziveze ubukhona beRuthenium 106 emikhondweni. Iziteshi ezahlukahlukene zaseYurophu ezixhunywe kwi-IRSN kusukela ngo-Okthoba 3 ziqinisekisile ukuba khona kwemisebe. Imiphumela etholakele kusukela ngo-Okthoba 6 ikhombisa ukuthi kuncipha njalo eRuthenium. Ngaphezu kwalokho, kusukela ngo-Okthoba 13, ukutholakala kuyaphela ezindaweni zaseFrance. Kamuva, okwamanje, kubonakala sengathi iminonjana yeRuthenium ayikho, futhi awasatholakali kwenye indawo eYurophu.
Ngemuva kokuhlaziywa, indawo lapho ngabe yenzeke khona inkululeko izotholakala ezintabeni zase-Ural. Ngakho-ke, akunakwenzeka ukuthola ukuthi yiliphi izwe "elibhekele". Izintaba ze-Ural zinqamula iYurophu futhi kwabelwana ngazo phakathi kweRussia neKazakhstan. Inhlangano yaseFrance, esheshe yakhipha isinqumo sokuthi iqhamuka kumshini ophehla amandla enuzi, ichaze ukuthi kwenzeka ngesonto lokugcina likaSepthemba. Esikhundleni salokho into enengqondo kunazo zonke ukuthi yehluleka esikhungweni semithi enemisebe, ayinqumi ukuthi kungahle kube ukwehluleka ekwelapheni uphethiloli wenuzi.
I-Ruthenium 106 ingumkhiqizo wokwehlukaniswa kwama-athomu ku-reactor yenuzi, ngakho-ke ukukhululwa kwayo akukaze kwenzeke ngokwemvelo. Ukuwohloka kwesathelayithi neRuthenium 106 nakho kukhishiwe, ngoba uphenyo olwenziwe yi-International Atomic Energy Agency seluphethe ngokuthi ayikho isathelayithi equkethe le molekyuli eye yawela eMhlabeni.
Ukukhishwa kwalesi sici kwakukukhulu kakhulu, kulinganiselwa ukuthi kwakuphakathi kuka-100 no-300 teraBecquerel. Inhlanhla enkulu yokuthi ayilimazanga muntu. I-IRSN iveze ukuthi ukukhishwa okunjalo, ukube kwenzeka eFrance, bekuzodinga ukukhishwa okuphuthumayo kwamakhilomitha azungeze lapho beqa khona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » IYurophu ithola ifu elinemisebe yeRuthenium 106